Vakafumura nzira yekuona PIN yeATM, kunyangwe manhamba akavharwa neruoko | Linux Addicts
Vakafumura nzira yekuona PIN yemutauri, kunyangwe manhamba akavharwa neruoko
Mazuva mashoma apfuura boka revatsvakurudzi kubva kumayunivhesiti ePadua (Italy) uye Delft (Netherlands) akazivisa nekushambadzira ruzivo nezve nzira yekushandisa muchina kudzidza kugadzira patsva PIN kodhi yakapinda kubva muvhidhiyo kurekodha yenzvimbo yekupinda paATM yakavharwa neruoko.
Paunenge uchiisa 4-manhamba PIN, mukana wekufanotaura kodhi chaiyo inofungidzirwa kuva 41%, kupihwa mukana wekuedza katatu usati wavharira. Kune mashanu-manhamba ePIN kodhi, mukana wekufungidzira waiva 5%.
Mukuwedzera, kumwe kuedza kwakaitwa umo vazvipiri ve78 vakaedza kufanotaura PIN code kubva kumavhidhiyo akarekodhwa akafanana. Muchiitiko ichi, mukana wekufanotaura kwakabudirira waiva 7,92% nekuedza katatu.
Mukutsanangura nzira yakashandiswa, inotaurwa kuti Kana iyo digital panel yeATM yakafukidzwa nechanza cheruoko, chikamu cheruoko chiri kupindwa chinoramba chisina kuvharwa, chii zvakakwana kufanotaura kudzvanya kushandura nzvimbo yeruoko uye kutama kweminwe isina kuvharwa zvachose.
MaATM anomiririra anonyanya kushandiswa muhurongwa hwekubvisa mari. IEuropean Central Bank yakashuma mari inodarika bhiriyoni gumi nerimwe yakabviswa uye kurodha / kurodha matransports kuEuropean ATM muna 11.
Kunyange zvazvo maATM akaita shanduko dzakasiyana-siyana dzetekinoroji, nhamba dzekuzivikanwa kwevanhu (PINs) dzichiri nzira dzinonyanya kuzivikanwa dzemidziyo iyi.
Nehurombo, iyo PIN mashandiro ari panjodzi yekurwiswa kuburikidza neakavanzika makamera akaiswa padhuze neATM kuteya keypad.
Paunenge uchiongorora mapindiro edijiti rega rega, iyo sisitimu haisanganisi makiyi asingakwanisi kudzvanywa, tichifunga nezve nzvimbo yechanza chinofukidza; uye inoverengerawo zvinonyanya kudzvanywa zvakasiyana zvichienderana nenzvimbo yeruoko rwekudzvanya, zvinoenderana nenzvimbo yemakiyi. Kuti uwedzere mukana wekuona chinopinza, ruzha rwekudzvanya runogona zvakare kurekodhwa, iro rakasiyana zvishoma pakiyi yega yega.
Kuedza kwakashandisa muchina wekudzidza system zvichibva pakushandiswa kweiyo convolutional neural network (CNN) uye inodzokororwa neural network yakavakirwa paLSTM (Yakareba Yenguva Yekurangarira) yekuvakisa. CNN yaive nebasa rekuburitsa dhata renzvimbo kune yega yega furemu, uye LSTM yakashandisa iyi data kuburitsa mapatani anosiyana nekufamba kwenguva. Muenzaniso wacho wakadzidziswa paPIN code yekupinda mavhidhiyo ekurekodha nevanhu 58 vakasiyana vachishandisa nzira dzekuvhara dzekupinda dzakasarudzwa nevatori vechikamu (mumwe nomumwe mubatanidzwa akapinda 100 macode akasiyana, kureva, 5800 yekupinda mienzaniso yakashandiswa pakudzidziswa). Mukati mekudzidziswa, zvakaratidzwa kuti vashandisi vazhinji vanoshandisa imwe yenzira nhatu huru dzekuvanza kupinda.
Kudzidzisa modhi yekudzidza muchina, sevha yakavakirwa paXeon E5-2670 processor ine 128 GB ye RAM uye matatu Tesla K20m makadhi ane 5 GB yendangariro imwe neimwe yakashandiswa. Chikamu chesoftware chakanyorwa muPython uchishandisa raibhurari yeKeras uye Tensorflow chikuva. Sezvo mapaneru ekupinda eATM akasiyana uye mhedzisiro yekufungidzira inoenderana nehunhu hwakaita sekiyi saizi uye topology, kudzidziswa kwakasiyana kunodiwa kune yega yega yepaneru.
Sechiyero chekuzvidzivirira zvinopesana nenzira yakarongwa yekurwisa, zvinokurudzirwa kushandisa 5-manhamba ePIN kodhi pane mana kana zvichibvira, uye zvakare edza kuvhara yakawanda yenzvimbo yekupinda neruoko rwako (Nzira yacho ichiri kushanda kana inenge 75% yenzvimbo yekupinda yakavharwa nemaoko). Zvinokurudzirwa kuti vagadziri veATM vashandise zvakakosha zvidziviriro zvinovanza mukova, pamwe chete neasiri-mechanical, asi tactile masuo ekupinda, nzvimbo yenhamba iyo inoshandura zvisizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vakafumura nzira yekuona PIN yemutauri, kunyangwe manhamba akavharwa neruoko
Maitiro ekushandura Mifananidzo kuVhidhiyo Nyore muLinux
Microsoft Outlook: nzira nhatu dzakanakisa kumutengi wemeyili